I-Pension Landhaus-Oesen, encane kodwa enhle - I-Airbnb
I-Pension Landhaus-Oesen, encane kodwa enhle
Bollendorf, Rheinland-Pfalz, i-Germany
Indlu yezivakashi ethokomele epaki yemvelo yaseJalimane-Luxembourgish itholakala ngokumangalisayo endaweni ethule ebheke eningizimu ngaphezu kwedolobhana kodwa emaphakathi.
Kusukela kuvulandi unombono omuhle weSauer Valley kanye neSwitzerland yaseLuxembourg.
Amakamelo avulekile alungele abathandi bemvelo, abaqwali kanye nabahamba ngamabhayisikili. Amabhayisikili asezintabeni nabashayeli bezithuthuthu nabo basezandleni ezinhle nathi; Ukuvakasha kwezithuthuthu eziqondisiwe uma ucelwa. Amadolobha amahle aseTrier naseLuxembourg aqhele ngemizuzu engama-35 ukusuka endlini yethu yezivakashi.
Indlu yethu yezivakashi itholakala ngenhla kwe-Bollendorf, evumela ukubuka okumangalisayo kwayo yonke i-Bollendorf ne-Luxembourg Switzerland ukusuka kuvulandi wakho. Siyakwazisa ukunethezeka namakamelo avulekile. Igumbi lakho lesidlo sasekuseni liyigumbi lethu leziko, lapho uzozizwa usekhaya khona.
4.25 · 16 okushiwo abanye
Idolobhana lethu liyindawo ekahle yokuqala ukwazi i-Eifel enhle yaseningizimu. Izwe lethu elinamadwala lihluke kakhulu kubahambi kanye nabagibeli bamabhayisikili kangangokuthi kukhona okungatholakala yonke indawo. Ku-www.felsenland-suedeifel.de uzothola ulwazi lwamanje futhi ungakwazi futhi ukuhlanganisa imizila yakho yokugibela izintaba futhi uqale ukuvakasha kwakho khona kanye emnyango wethu.
Epaki elikhulu langaphambi komlando e-Teufelsschlucht (Devil's Gorge) ungakwazi ukuhamba ubuye ngesikhathi uye eminyakeni engaphezu kwezigidi ezingu-620.
Izinhlobo ezingenakubalwa zama-dinosaurs zilinde ukutholwa nguwe.
Ungathola ulwazi olwengeziwe ku: www. dinopark-teufelsschlucht.de
Kodwa hhayi kuphela imvelo ehlaba umxhwele, amadolobha amahle aseTrier naseLuxembourg kumele nakanjani avakashelwe kanye.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bollendorf namaphethelo